Akwụkwọ nke Senraj Soundar na Martech Zone |
Edemede site na Senraj Soundar
Mgbe Watson ghọrọ onye mmeri Ọrịa, IBM jikọrọ aka na Cleveland Clinic iji nyere ndị dọkịta aka ngwa ngwa ma melite ogo ziri ezi nke nyocha ha na ndenye ọgwụ ha. N'okwu a, Watson kwalitere nka nke ndị dibịa. Yabụ, ọ bụrụ na kọmputa nwere ike inye aka rụọ ọrụ ahụike, n'ezie ọ ga-adị ka mmadụ nwere ike inye aka ma melite nka nke onye na-ere ahịa. Ma, kọmputa ahụ ọ ga-anọchi ndị ọrụ ahịa? Ndị nkuzi, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị ọrụ njem, na